Free internet- စာမျက်နှာ3- MYSTERY ZILLION
spyware doctor လေးသုံးကြပါဗျို့။ keygen ကိုပေးပါ့မယ်။ version 5.0.5 အတွက်ပါ။
စေတနာနဲ့ ပြောတာနဲ့ပြောတာနော်။ ပီးမှ ဘာဖြစ်သွားလို့ပါ၊ ညာဖြစ်နေတယ်ထင်တယ် လာမလုပ်နဲ့။
format တာချလိုက်တော့။ )
ရိုးရို Printer ဖြင့် poster ကြီးပြုလုပ်ခြင်
သင်သည် သင့် ချစ်သူ့ ပုံကို လူတစ်ရပ် လောက်ကြီး သော poster ကြီး အဖြစ် print လုပ်ပြီး သင့် အခန်း တွင် ချိတ်ဆွဲ ချင်တယ် ဆို ပါစို့။
၁။ Poster ကြီးများ print လုပ်ပေး သော ဆိုင်တွင် ငွေများများ ပေးပြီး အပ်နှံ နိုင်သည်။ (ပထမ နည်)
၂။ သင့် အိမ်ရှိ A4 ဆိုက် printer ကို သုံးပြီး ၄င်း poster ကြီကို print လုပ်ခြင်း။(ဒုတိယ နည်း)
ဒါပေမဲ့ printer သေးသေး လေးနဲ့ ဘယ်လို print လုပ် မှာလဲ။ လွယ်လွယ် လေးပါ။ PosteRazor software ကို သုံးပြီး print လုပ်လိုက် ရင်ရ ပါတယ်။
ဒီ software ဟာ ပုံ အကြီးကြီး ကို အပေါ် ပုံမှာ ပြထား တဲ့ အတိုင်း၊ အကွက် သေးသေး လေးများ ဖြစ်အောင် ဖြတ်ပေး ပါတယ်။ ပြီးရင် သင့် A4 ဆိုက် printer လေးနဲ့ print လုပ်ပြီး သူ့ နေရာ နဲ့သူ ဆက်ပေး လိုက်ရင် ခန်းလုံးပြည့် ပုံကြီး ဖြစ်သွား ပါ လိမ့်မယ်။
ဒီ Sofrware ဟာ အလကား ပေးတဲ့ free software ဖြစ် ပါတယ်။ ၄င်း PosteRazor software ကို open source GNU License နဲ့ ဖြန့်ဝေ ပေးထား ပါတယ်။
၄င်းကို http://sourceforge.net/projects/posterazor/ မှာ အခမဲ့ download လုပ်နိုင် ပါတယ်။
စမ်းကြည့်တာ မရလို့့ ဘာတွေလိုအပ်လဲ သေသေချာချာလေး ရှင်းပြပေးပါလား
အဲ တော့......မှာသွားလို့ .......အဲဗျ
C:\_Documents and Settings\_your user name\_Cookies ထဲကိုအရင်သွားလေ
ပြီးရင် အဲဒီ့ထဲက ရှိသမျှဖိုင်တွေ အကုန်ဖျက်ပစ် (index.dat မပါ)။
Keygen မပေးတော့ဘဲ key ကို ပေးလိုက်မယ်နော် :P
အဲ့ဒီ3တုံးနဲ့ချိတ်တာရ လား?
ကျနောက ချိတ်လိုကို မရတာ ..connecting to the network ဆိုပြိမရ ဘူး...နောက်တခါ ပြန်ချိတ် လည်: အဲဒီလိုပဲ ပေါတယ်
မြင်သာမြင်ရ မကျင်ရတဲ့ ဘဝ ပေါ.ဗျာ...
cyber မှာ သွားသုံး ရင် wireless ခုလုတ် လေးကို ဖွင့်ထား လိုက်တာနဲ့ တန်: သုံးလို့ရတယ်...
Length အရမ်းေ၀းလို့နဲ့တူပါတယ်။ Buildin wifi နဲ့ဘဲသုံးတာထင်တယ်။
ရပါ့ဗျား။ speederXp လေးနဲ့တွဲသုံးတာ လန်ထွက်နေတာဘဲ။ ဟိ
နာတော့ ဒီလိုလေး မြင်နေရရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်
ဒီမှာ ကီးဂျန်တွေ ပေးနေတယ်ဗျို့
Acrobat 3D 8.1.0.exe 195k
Acrobat7Profession..>
Acrobat 8 Pro Keygen..>
Acrobat 8 keygen + A..>
Adobe Affter Effects..>
Adobe CS3 Design Pre..>
Adobe CS3 Flash Keyg..>
Adobe CS3 Master Col..>
Adobe CS3 Web Premiu..>
Adobe Captivate 2.0...>
Adobe Captivate 3.0...>
Adobe ColdFusion 8.0..>
Adobe Creative Suite..>
Adobe FrameMaker 7.1..> 176k
Adobe FrameMaker 8.0..> 195k
Adobe LiveCycle Desi..> 176k
Adobe OnLocation CS3..> 195k
Adobe Photoshop Elem..> 176k
Adobe Photoshop Elem..> 146k
Adobe Premiere 7.0 K..> 178k
Adobe Premiere Eleme..> 176k
Adobe Premiere Eleme..> 219k
Adobe Premiere Eleme..>
Adobe Premiere Pro 1..> 174k
Adobe RoboHelp 6.0 K..> 204k
Adobe Robohelp Serve..> 147k
Adobe Version Cue 1...> 159k
Adobe Visual Communi..> 307k
Adobe Web Premium CS..> 319k
After Effects CS3.exe 284k
Audition 1.5 Keygen..> 160k
Audition 2.0 Keygen.exe 201k
Contribute CS3 VLK.exe 176k
DreamWeaver CS3 Keyg..> 313k
Dreamweaver CS3 VLK.exe 176k
Dreamweaver CS3.exe 194k
Encore DVD 2.0.exe 201k
FireWorks CS3 Keygen..> 319k
Fireworks CS3 Keygen..> 194k
Fireworks CS3 VLK.exe 19-May-2008 23:34 176k
Flash CS3 Keygen + A..> 243k
Flash CS3 Keygen.exe 194k
GoLive CS3 Keygen.exe 195k
InCopy CS3 VLK.exe 176k
InDesign CS3 VLK.exe 176k
PhotoShop CS3 Extend..> 331k
Photoshop CS3 Activa..> 236k
Photoshop CS3 Extend..> 176k
Photoshop CS3 Keygen..> 194k
Photoshop Lightroom ..> 196k
Photoshop Lightroom ..> 203k
Premiere Pro CS3.exe 287k
SoundBooth CS3.exe 565k ):)):))
တင်ပေးထားသော ပရိုဂရမ်များကို CD/DVD ဖြင်ပြုလုပ်ပြီး Cyber တစ်ခုကနေ Free ပေးေ၀သွားရန်အစီအစဉ်ရှိပါသည်။ သို့သော် မည်သည် Cyber တွင်ပြုလုပ်ရမယ်ကိုမူ မရွေးချယ်ရသေးပါ။ အကြံပြုစေလိုပါသည်။
မနာ လိုလိုက်တာ ...
ကျနောလည်:သုံးချင်တယ်...သေသေ ချာချာ step by step ချိတ်ပုံ လေးပြေါပြဘာ ကိုမင်းသား
မဝေးဘူးဗျ..မျက်နှာချင်း ဆိုင်တိုက် ကcafe နဲ့ချိတ်မိတာဗျ
နာကွ။ တင်ပေးပါ့မယ်ဗျာ။ နက်ဖြန်သို့မဟုတ် ဘယ်သောအခါ ........... လို့မထင်နဲ့
Congratulation ပါ Vassilihunt (ဟူး.... နာမည်က၇ှည်လိုက်တာ)
ကျန်တဲ့သူတွေ အခက်အခဲရှိနေရင် ကူညီဖြန့်ေ၀ပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေ။
thanks in advance ! waiting !!!!! pls don't make my neck long..:D:D:D
:1::1:ကျနော်လဲလိုချင်တယ်။ကျနော့် mail ကတော့[email protected] ပါ။ I am waiting from you. thanks.:101::101:
icyprince9 wrote: »
I also want to get whatever it is for free. hehehe
Email me as well. [email protected] :D:D
P.S I have no idea what boycomplex is asking for from prince. :P:P
email me as well. [email protected] :d:d:d
p.s i have no idea what boycomplex is asking for from prince. :p
နီးနီး အရှုပ်လုပ်နေတယ် (အဲ) အလုပ်ရှုပ်နေတယ်ကွယ်။
:103::103:ကျနော်ကိုလည်းPM ပို့ထားပေးပါနော်။ကျနော် email က [email protected] ပါ။:103::103:
ဘယ်မှာမှ ဒေါင်းမရ ဖြစ်နေတာ
ဒီ post ကြောင့် တော်တော် အဆင်ပြေသွားတယ် :D:D
ဒီ post ကြောင့် တော်တော် အဆင်ပြေသွားတယ် :d:d:d
၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ။ တဆင့်ပြန်လည် ဖြန့်ေ၀ပါဦး ခင်ဗျား။ :68:
ဒီကောင်ကို ပေးဖို့ တော်တော်လေး စဉ်းစားရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ Anti-virus နဲ့ မလွတ်လို့ပါပဲ။ Croogle 1.91 “You King”
ဒီကောင်က Software တွေအတွက် crack တွေ၊ ကီးတွေ ရှာပေးနိုင်ပါတယ်။ သူက keygen တွေ share ထားတဲ့ site တွေနဲ့ ချိပ်ပေးပါတယ်။ direct ရှာပြီး download လုပ်လို့ရအောင် လုပ်ပေးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Anti-virus နဲ့ မလွတ်ပါဘူး။ ဒီကောင့်ကို သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Anti-virus protection ကို ခဏ pause (သို့) Exit လုပ်ပေးထားရပါမယ်။ ဒီ software က portable ပါပဲ။ သူ့ကို မဖွင့်ခင် Anti-virus ကိုအပေါ်က ပြောခဲ့သလို လုပ်ထားပေးပါ။ ပြီးရင် Search box မှာ software နာမည် ရိုက်ထည့်ပြီး crack လိုချင် crack ၊ serial no. လို ချင် serial ကို check ပေးပြီး ရှာလိုက်ပါ။ လိုချင်တာ ရပြီ download လုပ်မယ်ဆိုရင် right click နှိပ်ပြီး Download ကို နှိပ်ပေးပါ။ အခြား software တွေအတိုင်းပဲ download ကျလာမှာပါ။(IDM သုံးထားရင် IDM ကပေါ့)
ပြီးရင် ဒီ software ကိုပိတ်ပြီး Anti-virus protection ကို ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါသုံးနေစဉ် အတွင်း protection ဖွင့်မိရင် ရန်ဖြစ်ပြီး restart ကျသွားပါတယ်။ ပြန်တက်လာရင်တော့ ပုံမှန်ပါပဲ။ ဘာမှ ထိခိုက်မှုမရှိပါဘူး။ ကျနော့် စက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးထားတဲ့ Anti-virus က Kaspersky Antivirus 2009 ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ချင်း windows ချင်းမတူတဲ့ အတွက် သက်ရောက်မှုချင်း တူချင်မှ တူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကြိုပြောထားပါတယ်။ Antivirus နဲ့ မလွတ်ပါဘူး။ ကျနော်လုပ်ထားတဲ့ application လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သာမာန် အသုံးပြုသူတွေ Download လုပ်မနေပါနဲ့။ software တွေကို ကီးရှာပေးချင် ပြန်ရှယ် ချင်တဲ့ လူတွေကတော့ မိမိစက် မိမိတာ၀န်ယူ နိုင်တယ်ဆိုရင် သုံးနိုင်ပါတယ်။ ကျနော် က share ပေးတာ ဖြစ်လို့ ကျနော် သတိပေးတာပါ။
“အောက်ပါဖိုင်အား Download လုပ်ရန်အတွက် Anti-virus ကို Pause (သို့) Exit လုပ်ပေးပါ”
“ကျနော် အပေါ်မှာ သတိပေးထားတာများကို သေချာဖတ်ပြီးမှ အသုံးပြုပေးပါ”
Mirror 1 Fileden : Croogle 1.91
Mirror 1 Zshare : Croogle 1.91
Mirror 1 Mediafire : Croogle 1.91
တစ်ခုလောက်တော့ ပြောမယ်နော်။ သူများစီးပွါးရေးပါ။ အလကားရဖို့ ကြိုးစားကြတာပါ။ ကျနော်ကလည်း စေတနာနဲ့ ကူညီတာပါ။ တုန့်ပြန်စကားတွေ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လူတွေစိတ်ကို ကျနော်သိသလောက်လေးပေါ့နော် ... ကလေးတစ်ယောက် “လက်ခုပ်လေး တီးပြတတ်ရုံ၊ တာ့တာလေး ပြတတ်ရုံနဲ့ လူတွေချစ်ကြပါတယ်။ အရမ်း ဉာဏ်ကောင်းတာပဲတဲ့”
လူကြီးတစ်ယောက် “ဆိုင်ကယ် အရှေ့ဘီးထောင်ပြီး စီးပြရင်တောင် မချီးမွမ်းတဲ့ အပြင် အမြင်ကတ်ကြပါတယ်။ စောစောသေ အေးရော ဆိုပြီး မေတ္တာတောင် ပို့လိုက်သေးတယ်”
ကျနော့်ကို ကလေးတစ်ယောက် အဖြစ်ပဲ မြင်ပေးပါလို့ ။ (ရှေ့ဘီးတော့ မထောင်ပြတော့ဘူးနော်) :P
C ကိုဖွင့် R-Click နှိပ် New - Folder နဲ့ Folder တစ်ခုလုပ်ပြီး x လို့ နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။ jpg file type ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို x ထဲ copy and paste လုပ်ပြီး ထည့်လိုက်ပါတယ်။ နာမည်ကို 1 လို့ rename ပေးလိုက်ပါတယ်။(ရေးရလွယ်အောင် ပေးတာပါ)
ကျနော်ဖွတ်ချင်သမျှ ဖိုင်အားလုံးကို select လုပ်ပြီး R-Click လုပ် Add to "Desktop" ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်။ Desktop နာမည်နဲ့ rar ဖိုင်တစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်။ (ဒီ အဆင့်ကို လုပ်ဖို့ အတွက် winrar သို့မဟုတ် 7zip လို မျိုး ဖိုင်ချု့ံပေးတဲ့ software တစ်ခုလိုပါတယ်။ winrar မရှိတဲ့လူ ဒီမှာ ယူပါ။ မသုံးတတ်တဲ့ လူတွေ အတွက်ပါ အသေးစိတ်ရေးပေးထားပါတယ် သီးခံ ဖတ်ပေးပါဦး။)
အဲဒီ rar ဖိုင်ကိုလည်း x ထဲ ကူးထည့်ပေးပါဦး။
ထည့်ပြီးပြီ ဆိုရင် Run မှာ cmd လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး Enter နှိပ်လိုက်ပါ။ ပေါ်လာတဲ့ cmd box မှာ cd\_x လို့ ရိုက်ထည့်ပေးပါ။ ပြီးရင် copy /b 1.jpg + desktop.rar 2.jpg လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ (space ခြားတာ မှားမှာ စိုးလို့ ထပ်ရေးပေးပါ့မယ် copy<space bar>/b<space bar>1.jpg<space>+<space>desktop.rar<space>2.jpg ဖြစ်ပါတယ်။) အောက်ပါအတိုင်း cmd မှာ ပေါ်လာပါမယ်။
2.jpg ဆိုတဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ခု ထပ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကို ကြည့်လိုက်ပါဦး။ နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ဖိုင်ဆိုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံကို လည်း ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ဖွင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပြန်ဖြည်မယ်ဆိုရင်လည်း rar နဲ့ ချုပ်တာ ဆိုရင်တော့ 2.jpg ကို winrar နဲ့ ဖွင့်ပြီး Extract to နဲ့ ဖွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 7z ဆိုရင်တော့ extract here ပေါ်ပါတယ်။
နားလည်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျနော် အတတ်နိုင်ဆုံး လွယ်အောင် ရှင်းပြထားတာပါ။ မိမိဖွက် ချင်တဲ့ ဖိုင်က jpg မဟုတ်ရင်လည်း ရပါတယ် ဖိုင်နာမည်နောက်မှာ ပြောင်းရေးပေးရုံပါပဲ။ (ဥပမာ- .txt text ဖိုင်ထဲမှာ ထည့်ဖွတ်မယ်ဆိုရင်လည်း filename.txt ပေါ့ဗျာ။ နောက်က ပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့ ဖိုင်ကလည်း 7-zip နဲ့ ချုံ့ ထားတာဆိုရင် desktop.7z ပေါ့)
တစ်ဖိုင်တည်း ထည့်ဖွက်လို့ ရတာလား ? ....
မဟုတ်ပါဘူး ထည့်ချင်သလောက်ကို ပေါင်းထည့်လို့ရပါတယ်။ ဖိုင်တွေ ပေါင်းချင်သလောက်ကို + တွေ နဲ့ ပေါင်းသွားပြီး နောက်ဆုံးမှာ + မခံတော့ပဲ နာမည် အသစ် တစ်ခု ပေးလိုက်ရင် ရပါတယ်။(ဥပမာ - x ထဲမှာပဲ အောက်ပါ ဖိုင်တွေကို ပေါင်းပါ့မယ်။)
တို့ကိုပေါင်းမယ်ဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်း cmd မှာ ရေးရပါတယ်
copy /b 1.jpg + 2.png + desktop.rar + flash.txt 3.gif
ရလာမယ့် ဖိုင်ကို gif type နဲ့လိုချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက အရှေ့ ဆုံးမှာ ရေးတဲ့ဖိုင်ထဲကို နောက်ကအားလုံး ပေါင်းပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ .txt ဖိုင်ထဲ ဖွက်ချင်ရင်တော့ txt ကို ရှေ့ဆုံးက ထားပေါ့။ jpg ကို ရှေ့ကထားပြီး txt နဲ့ ပြန်ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ မရဘူး မဟုတ်ဘူး ရပါတယ်။ ပုံတော့ ပေါ်လာတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို notepad အလွတ်ထဲ ဆွဲထည့်လိုက်သလို code တွေပဲ ပေါ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးသဘောပေါက်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ကျနော်ရေးလိုက်တာ ရှုပ်သွားမလားပဲ ...။
[SIZE=1][COLOR=Red]online ဂျလေဘီတစ်ယောက်အနေနဲ့ တွေ့ရှိချက်တွေပါ။[/COLOR][/SIZE]
3D Studio max v5.0.0.exe
A General Practice Library 2..1.121.txt
A to Z digital  adress book 1.02.txt
Acrobat 8 keygen + Activation.rar
Acronis Products (KeyGen).exe
Adobe Acrobat 3D v7.0 Professional (KeyGen).exe
Adobe Acrobat 8 Pro Keygen.rar
Adobe After Effects CS3 Keygen.rar
Adobe Contribute CS3 Keygen VLK.rar
Adobe Contribute CS3 Keygen.rar
Adobe CS2 (KeyGen).exe
Adobe CS3 (KeyGen).exe
Adobe CS3 Design Premium Keygen.rar
Adobe CS3 Master Collection Keygen.rar
Adobe CS3 Web Premium Keygen.rar
Adobe CS4 - Master Collection (KeyGen).exe
Adobe Dreamweaver CS3 Keygen.rar
Adobe Fireworks CS3 Keygen.rar
Adobe Flash CS3 Keygen.rar
Adobe InCopy CS3 Keygen VLK.rar
Adobe InDesign CS3 Keygen VLK.rar
Adobe InDesign CS3 Keygen.rar
Adobe Photoshop CS2.rar
Adobe Photoshop CS3 Extended VOLUME LICENSE KEYGEN.rar
Adobe Photoshop Elements 5.rar
Adobe Photoshop Extended CS3 Keygen.rar
Adobe Premiere Pro 2.0 Keygen + Activation.rar
Adobe Premiere Pro CS3 keygen + activation.rar
Adobe Premiere Pro CS3 Keygen +Activation.rar
Ahead Nero7(KeyGen).exe
Ahead Nero v6.6 (Keygen).exe
Ahead Nero v7.x (KeyGen).exe
AutoCAD 2008 (KeyGen).exe
Autodesk AutoCAD 2004 (KeyGen).exe
Autodesk AutoCAD 2005 (KeyGen).exe
Autodesk AutoCAD 2006 (KeyGen).exe
Autodesk AutoCAD 2007 (KeyGen).exe
Autodesk Building Systems 2006 (KeyGen).exe
Autodesk Civil 3D 2006 (KeyGen).exe
Autodesk Civil 3D Standalone  (KeyGen).exe
Autodesk DWF Composer v2.0 (KeyGen).exe
Autodesk Land Desktop 2006 (KeyGen).exe
Autodesk Raster Design 2006 (KeyGen).exe
Autodesk Raster Design 2006 Standalone (KeyGen).exe
Autodesk Revit Building v8.1 (KeyGen).exe
Autodesk Survey 2006 (KeyGen).exe
Corel Wordperfect Office v12 (KeyGen).exe
Cyberlink PowerDVD v7.2 (Serial).txt
DiVX6(KeyGen).exe
GFI LANguard Network Security Scanner v6.0.2005.0531 (KeyGen).exe
Internet Download Manager keygen.exe
Microsoft Office 2003 (KeyGen).exe
Microsoft Office 2007 (KeyGen).exe
Microsoft Windows Server 2003 64bit Ent&Std (KeyGen).exe
Microsoft Windows XP (KeyGen).exe
Microsoft Windows XP Corporate (KeyGen).exe
Microsoft Windows XP Professional 64bit (KeyGen).exe
mIRC v6.x (KeyGen).exe
mIRC v6.xx (KeyGen).exe
O&O Products (KeyGen).exe
ProCAD 2D Designer (KeyGen).exe
ProCAD 3D Smart (KeyGen).exe
Realtime Soft UltraMon v2.7.0 (KeyGen).exe
SiSoftware Sandra Engineer XI 2007 (KeyGen).exe
SolarWinds Engineer's Edition Toolset v8.1 (KeyGen).exe
TrendMicro OfficeScan Corporate 6.5 (KeyGen).exe
TrendMicro ScanMail 6.x for MS Exchange (KeyGen).exe
TrendMicro ScanMail v6.2 b1098 (KeyGen).exe
TrendMicro ScanMail v7.0 b1345 (KeyGen).exe
TrendMicro ServerProtect v5.x (KeyGen).exe
TuneUp Utilities 2006 v5.0.2326 (KeyGen).exe
TuneUp Utilities 2007 (KeyGen).exe
Veritas BackupExec 9.0 (KeyGen).exe
Veritas BackupExec 10.0 (KeyGen).exe
WinImage v7.00.7000 (KeyGen).exe
WinZip 10 (KeyGen).exe
WinZip v11.0 (KeyGen).exe
19.9 MB ရှိတယ်။ 1:30 လောက် upload လုပ်လိုက်ရတယ်။ ၀ူးးးးးးး :65:
really thanks fri:P ဇရီးကစ် ကစ်နေတာ:P
wifi case ကိုပြောတာလား။ software တွေကိုပြောတာလား။ :39::39::39:
wifi password ကဘယ်လိုဟက်ရတာတုန်းဗျာ့
ကွှျန်တော် အကိုပေးတဲ့ software နဲ့ဟက်တာမရဘူးဗျာ့
ဒီsoftware က wifi password မှရတာလား wireless တိုင်းမရဘူးလား
Hacking အကြောင်း ဘာဘာ ဘာမှမသိတော့ပါ။ ကျန်တဲ့ အစ်ကိုတွေရေ ၀ိုင်းကြ၀န်းကြပါ။
hello mr.prince , do you have any idea to post how to Heck wifi step by step?
I am waiting your post .:((:((
ကျနော် အဲဒါတွေမလုပ်တတ်တော့ပါဘူး။ :d:d:d
အဆင်ပြေရင် pm ပို့လိုက်ပါမယ်
I will buy you be too. plse PM me to my mail.
မူဘာဘူးဗျာ။ Hacking ဆိုတော့ နည်းနည်း သတိထားနေရတယ်လေ။ အကောင်းဆုံးကတော့ Google ဂုနော အနန္တောလုပ်တာဘဲထင်ပါတယ်။ အတ္တဟိ အတ္တနောနာထော လေ။ :106::106::106:
၀ါတွင်းကာလ လေးလပတ်လုံး အသားရှောင်သည်။ beer တိုက်ချင်လျှင် ကိုက်လန် ကင်၊ ရုံးပတီ ကင်၊ သီးစုံပလိန်းများနှင့်သာ ခွင့်ပြုမည်။
sure !!! come 8th mile ! :D:D
လာခဲ့မယ်ဘယ်နေရာလဲ address လေပြောလေ:41::113:\_:d/
၈ မိုင် Tiger မှာ ညတိုင်းလိုလို ရှိနေတတ်ပါတယ်။ :6:
ဒီကောင်ကို ပေးဖို့ တော်တော်လေး စဉ်းစားရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ anti-virus နဲ့ မလွတ်လို့ပါပဲ။ croogle 1.91 вЂњyou kingвЂќ
вЂњအောက်ပါဖိုင်အား download လုပ်ရန်အတွက် anti-virus ကို pause (သို့) exit လုပ်ပေးပါвЂќ
вЂњကျနော် အပေါ်မှာ သတိပေးထားတာများကို သေချာဖတ်ပြီးမှ အသုံးပြုပေးပါвЂќ
တစ်ခုလောက်တော့ ပြောမယ်နော်။ သူများစီးပွါးရေးပါ။ အလကားရဖို့ ကြိုးစားကြတာပါ။ ကျနော်ကလည်း စေတနာနဲ့ ကူညီတာပါ။ တုန့်ပြန်စကားတွေ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လူတွေစိတ်ကို ကျနော်သိသလောက်လေးပေါ့နော် ... ကလေးတစ်ယောက် вЂњလက်ခုပ်လေး တီးပြတတ်ရုံ၊ တာ့တာလေး ပြတတ်ရုံနဲ့ လူတွေချစ်ကြပါတယ်။ အရမ်း ဉာဏ်ကောင်းတာပဲတဲ့вЂќ
လူကြီးတစ်ယောက် вЂњဆိုင်ကယ် အရှေ့ဘီးထောင်ပြီး စီးပြရင်တောင် မချီးမွမ်းတဲ့ အပြင် အမြင်ကတ်ကြပါတယ်။ စောစောသေ အေးရော ဆိုပြီး မေတ္တာတောင် ပို့လိုက်သေးတယ်вЂќ
ကျနော့်ကို ကလေးတစ်ယောက် အဖြစ်ပဲ မြင်ပေးပါလို့ ။ (ရှေ့ဘီးတော့ မထောင်ပြတော့ဘူးနော်)
အခု ဒီပို့စ်ကိုတင်သူဟာ ကိုသံလုံငယ် ဟုတ်ပါသလား..
ကျနော် online မှာ ဂျလေဘီလုပ်ရင်း ညီလေးတစ်ယောက်ကပြတာကို ပြန် လည် Ref: လုပ်တဲ့သဘောပါ။ ဒါကြောင့်မို့ Title မှာ ရေးထားပါတယ်။
ဘာဘဲပြောပြော ကိုသံလုံငယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Windows XP SP3 vanilla" edition 75mb works fast
ဒီ OS ကို Install လုပ်ဖို့ အချိန် ၂မိနစ်ခန့်သာ လိုအပ်ပြီး Ram 256MB ရှိယုံနှင့်တင် အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။Install လုပ်ပြီးတဲ့
အခါမှာ HDD မှာ 600MB ကျော်သာ Disk space ယူပါလိမ့်မယ်။OS အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းမှာတော့ Ram 24.10MB ကိုသာ
အသုံးပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Activate Key မလိုပဲ အသုံးပြုနိုင်ပြီး အဖွင့်အပိတ် အချိန် ၁၂စက္ကန့်အောက်သာ ကြာမြင့်ကြောင်း
လိုချင်ရင်တော့ အပိုင်း(၁) အပိုင်း(၂) မှာယူနိုင်ပြီး File Type ကတော့ ISO ဖြစ်ပါတယ်။
ပဒုမ္မာဒေါ့ကွန်းမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပါ။ နေမင်းကြယ်စင် တင်ထားတဲ့ information ပါ။
software ကို ifile မှာပြန်တင်ပေးပါ့မယ်။
အညွန်ကောင်းလိုက်တာ တကယ်လာ ကျွန်တော်ကိုပေးယူမယ်:)
I don't know where tiger is ? beside wa haa ha ?
btw , I want Avast premium edition full version ? hellpp:D
or will u recommend any good antivirus sw ?
Avast ကိုတော့ ifile မှာတင်ပေးမယ် \_:D/
ကျနောသုံးနေတာ kaspersky total space security ပါ (Server Version) :113:
ကိုယ်သုံးနေကျကိုဘဲ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တာမို့ ဘယ်ဟာကိုမှ မရည်ညွှန်းလိုပါခင်ဗျာ။
အကောင်းဆုံးအနေအထားကတော့ ကိုယ်ကိုကိုယ် ဆင်ခြင်ဖို့ပဲလို့ထင်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ Anti-virus ကိုသုံးသုံး မဆင်ခြင်ဘဲနေမယ်၊ ဂရုမစိုက်ဘဲနေမယ်ဆိုရင်တော့ သွားမှာပါဘဲ။:105: